Sphre AIR စျေး - အွန်လိုင်း XID ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Sphre AIR (XID)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Sphre AIR (XID) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Sphre AIR ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Sphre AIR တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Sphre AIR များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Sphre AIRXID သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0661Sphre AIRXID သို့ ယူရိုEUR€0.0558Sphre AIRXID သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0503Sphre AIRXID သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0602Sphre AIRXID သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.594Sphre AIRXID သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.416Sphre AIRXID သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.46Sphre AIRXID သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.246Sphre AIRXID သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.088Sphre AIRXID သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0916Sphre AIRXID သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.48Sphre AIRXID သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.513Sphre AIRXID သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.354Sphre AIRXID သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.96Sphre AIRXID သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.11.15Sphre AIRXID သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0906Sphre AIRXID သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0993Sphre AIRXID သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.06Sphre AIRXID သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.46Sphre AIRXID သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.98Sphre AIRXID သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩78.44Sphre AIRXID သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦25.7Sphre AIRXID သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.85Sphre AIRXID သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.83
Sphre AIRXID သို့ BitcoinBTC0.000006 Sphre AIRXID သို့ EthereumETH0.000166 Sphre AIRXID သို့ LitecoinLTC0.0011 Sphre AIRXID သို့ DigitalCashDASH0.00065 Sphre AIRXID သို့ MoneroXMR0.000706 Sphre AIRXID သို့ NxtNXT4.74 Sphre AIRXID သို့ Ethereum ClassicETC0.00918 Sphre AIRXID သို့ DogecoinDOGE19.27 Sphre AIRXID သို့ ZCashZEC0.000685 Sphre AIRXID သို့ BitsharesBTS2.52 Sphre AIRXID သို့ DigiByteDGB2.44 Sphre AIRXID သို့ RippleXRP0.214 Sphre AIRXID သို့ BitcoinDarkBTCD0.00222 Sphre AIRXID သို့ PeerCoinPPC0.235 Sphre AIRXID သို့ CraigsCoinCRAIG29.42 Sphre AIRXID သို့ BitstakeXBS2.75 Sphre AIRXID သို့ PayCoinXPY1.13 Sphre AIRXID သို့ ProsperCoinPRC8.1 Sphre AIRXID သို့ YbCoinYBC0.00003 Sphre AIRXID သို့ DarkKushDANK20.7 Sphre AIRXID သို့ GiveCoinGIVE139.75 Sphre AIRXID သို့ KoboCoinKOBO14.39 Sphre AIRXID သို့ DarkTokenDT0.0609 Sphre AIRXID သို့ CETUS CoinCETI186.33